Ny kabinetran'ny minisitra dia handinika ireo tetik'asa momba ny tany sy trano ho tafiditra ao amin'ilay lisitra nankatoavina ho an'ny Fandaharam-bola amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola. Ny tetik'asa momba ny trano sy trano ankatoavina dia tafiditra ao anatin'ny sokajy roa lehibe:
Raha vantany vao nekena, ny tetik'asa momba ny trano sy tany dia nanjary azo ekena mba hananana mari-pahaizana mendrika avy amin'ireo mpangataka ho olom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola.
Ny mpangataka dia takiana amin'ny fanatanterahana fifanarahana fividianana sy fivarotana mifamatotra amin'ny fampanjariam-bola amin'ny tetikasa trano sy trano nekena. Ny fampanjariam-bola, mitovy amin'ny vidin'ny fividianana nifanarahana, dia apetraka ao amin'ny kaonty escrow tsy azo ivalozana tantanin'ny mpandrindra sy ny Citizenship by Investment Unit ao Saint Lucia.
Raha vantany vao nankatoavina ny fangatahana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny tetik'asa trano, dia ilaina izao fampiasam-bola farany ambany izao: